Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop | Androidsis
Izy io Samsung Galaxy S3 Izy io dia terminal tsara indrindra, afaka mihetsika malalaka sy mahomby ny kinova Android Lollipop vaovao Zava-misy marina izy io, na eo aza ny fanapahan-kevitry ny namana Samsung fa manova terminal izahay isan-taona.
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity amin'ny alàlan'ny tutorial tsikelikely, Hasehoko anao ny lalana mety manavao ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop amin'ny alàlan'ny Rom tsy ofisialy miorina amin'ny Cyanogen mod 12 Sa inona no mitovy CM12.
Alohan'ny hidiranantsika amin'ny olana ary hazavao ny lalana marina manavao ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop amin'ny CM12, Tsy maintsy milaza aminao aho fa na dia mbola ao anaty kinova heverina ho beta aza izy io, Beta 6 mba ho marina kokoa. Miasa tanteraka ny zava-drehetra ary manan-kery tanteraka amin'ny fampiasana isan'andro.
1 Fepetra ilaina hihaona hanavaozana ny Samsung Galaxy S3 mankany Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12
2 Ny fisie ilaina amin'ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 mankany amin'ny Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12
3 Rom CM12 fomba flashing ho an'ny Samsung Galaxy S3
Fepetra ilaina hihaona hanavaozana ny Samsung Galaxy S3 mankany Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12
Manana a Samsung Galaxy S3, modely internacional izay tsy maintsy ho Miorim-paka ary manana ny fanamboarana novaina.
Ataovy novaina ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova farany misy.
Manana backup, nandroid backup ny rafitra miasa ankehitriny rehetra.
Ny fisie ilaina amin'ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 mankany amin'ny Android Lollipop amin'ny fampiasana CM12
Rom CM12 Beta 6 ho an'ny modely Samsung Galaxy S3 Int.
Nohavaozina SuperSU ho an'ny Lollipop.
Vantany vao misintona ireo rakitra telo voafintina amin'ny endrika zip, Raha tsy misy decompressing dia adikao izy ireo amin'ny foton'ny fahatsiarovana anatiny ny Samsung Galaxy S3 ary manomboka indray amin'ny maody Recovery izahay mba hanarahana ny torolàlana amin'ny famolavolana ny Rom raha tsy mandingana ireo dingana rehetra lazaiko etsy ambany.
Rom CM12 fomba flashing ho an'ny Samsung Galaxy S3
Mandeha amin'ny safidy isika mamafa ny fanarenana izay napetrakay sy nofantenanay Hamafa laza / hamerina am-boalohany, Hamafa cache cache dalvik y Manadio Solo saina.
Ankehitriny dia mandeha amin'ny safidy isika endrika ary mi-format izahay: rafitra, cache, preload, data ary data / media. Ireto safidy ireto ao amin'ny TWRP dia hita ao anatin'ny Advanced Wipe.
Ankehitriny dia mandeha amin'ny safidy isika hametraka ary voalohany mampirehitra ny Rom CM12 izahay, faharoa ny Gapps Android Lollipop hanavao farany ny SupoerSU.
Farany dia averinay indray ny rafi-piasa vaovao namboarina tamin'ny alàlan'ny safidy Reboot rafitra izao.
Tsy hiandry am-paharetana fotsiny isika izao mandritra ny 10 minitra izay mety haharitra aorian'ny fiverenan'ny rafitra voalohany. Rehefa manomboka ihany izy io dia hanana ny kinova farany an'ny Android 5.0 Lollipop napetraka tsara ary miasa ao amin'ny Samsung Galaxy S3, izany rehetra izany dia mora sy na Samsung aza ohatrinona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fanavaozana ny Samsung Galaxy S3 amin'ny Android Lollipop
Ireo an'ny Samsung dia tsy azo soloina.
Fa ny ankamaroan'ny tsiny dia ny mpanjifa manohy adala izay mividy vokatra amin'ny marika tsy manaja azy ireo.
lennis dia hoy izy:
Hajaiko, miombon-kevitra aminao aho. Vao avy nilaza fahamarinana lehibe ianao.
Valiny tamin'i Lennis
Salama, inona ny bibikely ananan'ity Rom ity? Raha misy afaka miteny ahy azafady.
amos ortega dia hoy izy:
Raha mbola misy fanavaozana ny atitany amerikanina samsung s3
Valio amos ortega
Ao amin'ny pejin'ny mpandrindra XDA dia manana mpandrindra miara-miasa amin'ny ATT izy ireo, heveriko fa nahita momba ny 3 Rom 5.0.2 aho, afaka mandeha any ianao mahita.
Ny olana # 1 dia ny fakantsary.
Cynthia dia hoy izy:
Eny, manomboka amin'ny rafitra fiasa izay fitaovana mpitsikilo fehezin'ny maso ivoho mpitsikilo amin'ny tantara, Google.
Manantena aho fa hahita Fairphones miaraka amin'i Ubuntu atsy ho atsy, fa mandritra izany fotoana izany, matahotra mafy aho fa manana safidy hafa vitsivitsy ...: - /
Valiny amin'i Cintia
Ahoana ny fanavaozana ny Samsung s3 mini
Drafitra sy fananganana (@disenoyedific) dia hoy izy:
Miala tsiny fa an'ny S3 ihany ve ity sa azo atao amin'ny mini S3 ihany koa? MISAOTRA
Valiny amin'ny Design and Building (@disenoyedific)
Ho an'ny maodely iraisam-pirenena S3 ihany.
Azonao atao ve ny manome hevitra momba ireo bibikely ananan'ity Rom ity? Misaotra anao.
buu dia hoy izy:
Te hahafantatra ny hadisoana ananany koa aho ...
. dia hoy izy:
Vao nametraka ny efitrano aho ary ny marina dia tsy mahita lesoka betsaka aho.
Gabriel Ruiz dia hoy izy:
AHOANA NO FANTATRAO FA INTERNATIONAL INTERNATIONAL ny S3-ko? ARY IZAY REHETRA INDRINDRA IANAO IZAO TORITRAHANAO?
Mamaly an'i gabriel ruiz
Amin'ny maodely, ny iraisam-pirenena dia GT-I9300. Ary eo amin'ny lafiny fanarenana dia tiako foana ny PhilZ Touch.
jullian dia hoy izy:
Salama, nametraka azy aho ary nampiasa azy nandritra ny 8 andro, saingy nisy lesoka sasany nahatonga ahy hanapa-kevitra ny hiverina amin'ny rom ofisialy.
Mamaly an'i jullian
Ry namako, inona no tsy mandeha aminao?
Valiny tamin'i Frank
Anuvis dia hoy izy:
Ny tranga TELCEL -ko dia azon'ny mpandraharaha ampiasaina rehetra
Valiny tamin'i Anuvis
Luis Guillermo dia hoy izy:
Tavela aho nefa tsy afaka nanoratra horonantsary tao amin'ny instagram, misy olona afaka manome tanana ahy
Valiny tamin'i Luis Guillermo
Gitoru dia hoy izy:
Salama. Ny kinova iraisam-pirenena dia manondro ny famoahana azy ho an'ny orinasa rehetra, sa tsy izany? Manana ny GT i9300 miaraka amin'i Telcel (Mexico) aho. Na raha afaka manao ilay switch ho Lollipop aho? Misaotra
Mamaly an'i Gitoru
Roa andro lasa izay dia nametraka ny rom tamin'ny S3 aho ary amin'izao fotoana izao dia hitako ireto Bugs manaraka ireto:
-Raha apetrakao eo am-pelatanany izy ary mijanona ny terminal dia mihodina irery izy, raha vonoinao ilay izy miaraka amin'ny charger mifandray dia mirehitra ihany koa izy.
-Ny fampiharana fakan-tsary dia misy safidy vitsivitsy fotsiny, mampiasa fampiharana feno kokoa aho ary miasa tsy misy olana.
-85% ny menio dia amin'ny espaniola, ny ambiny amin'ny teny anglisy, fa ny tena ilaina dia espaniola, ary amin'ny ankapobeny ny ambiny dia takatra tsara.
Amin'izao fotoana izao tsy misy zavatra hafa, tsy misy ny lozam-pifamoivoizana manan-danja, tsiranoka ny terminal.
Novakiako tao amin'ny forum iray fa mijanona tsy manohana ireo terminal SAMSUNG intsony i Cyanogenmod, misy mahalala izany ve?
Salama, tsy manana ireo gapps aho, azafady mba misy manampy ahy, misaotra!
Mamaly an'i agustin
zolfuz dia hoy izy:
Ny tokony hataonao dia mandehana any amin'ny "https://basketbuild.com/gapps" ary sintomy ny rakitra "gapps-lp-20150222-signed.zip" mifanaraka amin'ny Lollipop 5.0.
Tsy fantatro ny antony tsy mandeha ny kinova GApps izay ampifandraisin'izy ireo ao amin'ilay lahatsoratra, zavatra mitovy amiko no nitranga tamiko ary afaka namaha izany aho.
Mamaly an'i zolfuz
Tsy afaka mamolavola ny preload aho
Salama hariva.- Tokony ho fantatro izay mahasoa ny S3 azoko, ny fiovan'ny OS, manana ny cyanogenmod 11 napetraka aho, ary manafana ahy kokoa izany, tsy maintsy nasiako onjam-peo (fanahy) izay niditra fanamafisam-peo aorian'ny valiny antso .- indraindray nantsoina aho rehefa mampiasa fakan-tsary dia fantatro fa haingana kokoa izy io
Ny fanavaozana ny Google Translate dia tonga miaraka amin'ny fandikana sary sy resaka amin'ny fotoana tena izy [Download APK]